WARBIXIN: Barcelona oo Albaabka ka dajisay todobo kamid ah daafaceeda iyadoo qorsheysay in Lix kale oo qaali ah ay soo qaadato – kuma jiro Stones | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Ciyaaraha » WARBIXIN: Barcelona oo Albaabka ka dajisay todobo kamid ah daafaceeda iyadoo qorsheysay in Lix kale oo qaali ah ay soo qaadato – kuma jiro Stones
WARBIXIN: Barcelona oo Albaabka ka dajisay todobo kamid ah daafaceeda iyadoo qorsheysay in Lix kale oo qaali ah ay soo qaadato – kuma jiro Stones
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 10-06-16 10:27 AM Iyadoo ciyaaryahanka khadka dhexe ee Denis Suarez heshiis uu ugu soo laabanayo Barcelona gaarey, kooxda heysata horyaalka Spain ayaa hadda dooneysa in ay ka fakiraan xaaladooda daaafaca.
Dani Alves iyo Marc Bartra ayaa durbaba xagaagan ka tagay kooxda, iyadoo Adriano uu ku biiri karo Lazio, Douglas weli ma uusan heli booska kooxda koowaad, halka Thomas Vermaelen uu doonayo inuu ku laabto Premier League.
Javier Mascherano ayaa sidoo kale wararka xanta suuqa kala iibsiga kujira, halka Aleix Vidal tan iyo markii uu kasoo tagay Sevilla uusan la qabsan kooxda Barcelona.
Kaliya Pique, Jordi Alba iyo Jeremy Mathieu ayay Barcelona hadda hubtaaa daafac ahaaan, iyadoo tababare Luis Enrique uu isha ku hayo ilaa lix daafac inuu kooxda u ishaaro.
Samuel Umtiti (Olympique Lyon, 22 sano jir)
Daafaca ku dhashay Cameroon ee Umtiti ayaa ciyaari kara labada daafac ee bidix ama daafaca dhexe, waana dooq ku haboon kooxda Luis Enrique,
waxaa lagu qiimeeyaa 25 milyan oo euros haddii uu ka dhaqaaqo kooxdiisa ka dhisan France ee Lyon
Marquinhos (PSG, 22 jir).
Waxaa aan shaki lahayn in ninka reer Brazil ee ‘talanti leh, uu ka dhaqaaqi karo PSG ,Luis Enrique ayaana 22 jirkaan ku bixin kara 40 million euros, waxaana loo arkaa bedelka Mascherano.
xiddiga caalamiga ah ee Spain ayaa doonaya inuu ka tago Chelsea kuna laabto La Liga, kooxda Catalans ayaa hubaal ay tahay in ay xiiseynayaan daafacaan boosaska badan, sidookale kooxda Athletic Club aya xiiseyneysa daafacaan.
wiil dhallinyarada ah ee reer Uruguay ayaa kaga soo dhaqaaqay La Liga kooxda reer Russia ee Rubin Kazan xagaagii lasoo dhaafay.
Lakiin Blaugrana ayaa xiiseyneysa, lin ay kasoo qaataan Lemos kooxdiisa, waxaa lagu qiimeeyaa lacag dhan 30 euros.
Magaca xidiga reer Brazil ayaa markii ugu horeysay suuqa kala iibsiga soo koray, Sidnei ayaa ka tagi doona kooxda Deportivo La Coruna, iyadoo ilo kala duwan ay leeyihiin wuxuu ku wajahan yahay kooxda reer Catalan.
Warar xanta ah ayaa sheegay inuu ka tagi doono kooxdiisa Celta Vigo daafaca buuxa kasoo uu isha ku hayo tababaraha kooxda Barcelona Enrique.
Barcelona ayaa 12 milyan euro ku heli karta daafacaan awooda badan ee suuqa laga heli karo.